I-OnePlus iya kuphehlelela ifowuni yayo yokuqala ye-5G kwisiqingatha sokuqala se-2019 | I-Androidsis
Ifowuni yokuqala ye-5G ye-OnePlus sele inomhla wokukhutshwa
UEder Ferreño | | Izaziso, OnePlus
Umdyarho wabavelisi be-Android ukuzisa ifowuni yokuqala ye-5G kwintengiso iyaqhubeka nezifundo zayo. Okwangoku sele sazi ukuba kukho abavelisi abaliqela abakhomba embindini wonyaka ozayo njengomhla wokufika kwefowuni yabo yokuqala ehambelana nale teknoloji. Ngoku i-OnePlus ikwajoyina uluhlu lweemveliso ezithengisa ifowuni nge5G.
Kwimeko yohlobo lwesiTshayina, esi sibhengezo siza emva kokubonisa uluhlu lwaso oluphezulu, i-OnePlus 6T. I-brand sele iqinisekisa ukuba iyasebenza kwifowuni ene-5G kwaye kancinci kancinci basinika imikhondo ngayo, ukongeza ekwazini ngakumbi ngokufika kwayo kwintengiso.
Ibingu-CEO wenkampani othe wagqabaza ngakumbi koku kudliwanondlebe. Ubanga ukuba unguyeIya kuba sisiqingatha sokuqala sonyaka olandelayo xa ifowuni yokuqala ye-5G ifika ukusuka kwi-OnePlus ukuya kwintengiso. Ke iya kuba sisiphelo sabo esitsha, esiza kuboniswa ngentwasahlobo, isixhobo esikhethelwe sona.
Ibrand ifuna ukuba yeyokuqala ukuba nefowuni ye5G kwintengiso ngezizathu ezahlukeneyo. Kwelinye icala, ukuba ngomnye woovulindlela ekusebenziseni obu buchwephesha, kodwa ube nakho ukufunda ngokukhawuleza ngokusebenza kwayo kunye nokudityaniswa kwayo kwiifowuni.
I-OnePlus okwangoku incokola nabaphethe iYurophu. Ngapha koko, u-CEO wenkampani ubanga ukuba ifowuni yakhe iya kuba yifowuni yokuqala ye-5G ezakwaziswa kwintengiso eYurophu. Ke kukho amabhongo amakhulu kwizicwangciso zenkampani, ekuya kufuneka zibonwe ukuba ziyafezekiswa na ekugqibeleni.
Into esiyibonayo yile Iimpawu zaseTshayina zisebenza okona kunzima ukukhuthaza i-5G kwihlabathi liphela. IHuawei kunye neZTE ziinkampani ezimbini ezisebenza kakhulu kuphuhliso lweenethiwekhi ze5G. Ngelixa i-OnePlus ithembisa ukuba yeyokuqala ukuba nefowuni ehambelana nayo kwintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ifowuni yokuqala ye-5G ye-OnePlus sele inomhla wokukhutshwa
Yintoni amanyathelo amabini okuqinisekisa kunye nendlela yokuvula kuGoogle
UMeizu ucacisa ukuba kutheni ingazukuvula ifowuni ye-5G kunyaka olandelayo